ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ တို့၏အိမ်: သရဏဂုံသုံးပါး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်း
သရဏဂုံဟာ ကလေး၊သူငယ်ကအစ လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့သင့်လျော်ပါတယ်။ဘာမှမကုန်မခန်း မပင်ပန်း လှဘဲနဲ့ အကျိုးကြီးလှတဲ့ သရဏဂုံတည်မှုကိုရနိုင်တယ်။
(၁) ဘုရား၊တရား၊သံဃာဆိုတဲ့ရတနာသုံးပါးအား သဒ္ဓါယုံကြည်စိတ်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အပ်နှင်း ခြင်း၊
(၂) ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ရတနာသုံးပါးကို မှီခိုအားထားခြင်း၊
(၃) ဘုရား၊တရား၊သံဃာရတနာသုံးပါး၏ တပည့်အဖြစ်ကိုခံယူခြင်း၊
(၄) ဘုရား၊တရား၊သံဃာရတနာသုံးပါးကိုရိုသေစွာရှိခိုးခြင်း ၊
.အဲဒီ (၄)ပါးအနက်မှ တပါးပါးကိုပြုလုပ်ရင်ပြုလုပ်တဲ့သူဟာ သရဏဂုံတည်တယ်လို မှတ်ယူရ ပါတယ်။
( ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ) စသည်ကိုသရဏဂုံသုံးပါး ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါ၏၊ တရားတော်ကို ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ပါ၏။ သံဃာတော်ကိုကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါ၏လို့ မြန်မာလို စိတ်ထဲက သိပြီး ဆိုရပါမယ်။
လောကမှာ ဘုရား၊တရား၊ သံဃာလို့ ဆိုတဲ့ ရတနာသုံးပါးဟာ အထွတ်အထိပ်အမြင့်ဆုံး၊အမြတ်ဆုံး ဖြစ်တယ်။ အဲဒီရတနာသုံးပါးထက်မြင့်တာ၊မြတ်တာမရှိတော့ပါဘူး။အဲဒီလိုအထွတ် အထိပ်အမြင့်ဆုံး၊အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ရတနာသုံးပါးအား(အတ္တသမံ ပေမံနတ္ထိ =မိမိကိုယ် ထက်ချစ်တာ မရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်း)မိမိအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို အပ်နှင်း လှူဒါန်းခြင်း ဟာ အင်မတန်အကျိုးများပါတယ်။
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည်လေးစားစွာနဲ့ စိတ်စေတနာ ပါပြီးကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မှ သရဏဂုံဆောက်တည်ရာ ရောက်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးဆိုပေးလို့လိုက်ဆို တာမျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာရထားလို့ အလွတ်ဆိုတာမျိုးဆိုရင်တော့အကျိုးမများလှဘူး။ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာပါဠိတွေရွတ်ဆိုတဲ့အခါ ဆိုလိုရင်းအနက် အဓိပ္ပါယ်ကို သိမှ ကျေးဇူးများ ပါတယ်။
သုံးကြိမ်ဆိုတာလဲအထူးလေးနက်စေချင်လို့ပါ။တစ်ကြိမ်တစ်ခါဆိုတာကတော့စိတ်မပါလက်မပါ၊ဝတ်ကျေ တန်းကျေ ဆိုတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ အခုသရဏဂုံ ဆောက်တည်တဲ့ လူကတော့ တကယ့် ယုံယုံကြည်ကြည် စိတ်ပါလက်ပါ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်း ဖြစ်တယ် ဆိုတာသိစေချင် လို့ သူ့ရဲ့ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မှုကို လေးနက်စေချင်လို့ သုံးကြိမ်ထပ်ဆိုခြင်း ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေး ကိစ္စတွေမှာသုံးကြိမ်ထပ်ဆိုမှုမှန်သမျှဟာ လေးနက်စေချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးဟာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူတို့ရဲ့ကြောက်ရွံခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊အပါယ်ဆင်းရဲ၌ဖြစ်ခြင်းစတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုပယ်ပျောက်၊ ချမ်းသာကို ရောက်တတ်လို့သရဏ= ကိုးကွယ်ရာလို့ခေါ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္ဆာမိဆိုတဲ့စာပိုဒ်သုံးခု (သို့) ဒီစာပိုဒ်သုံးခုကို နှုတ်ကရွတ် ဆိုတာကို သရဏဂုံဆောက် တည်တာလို့ထင်နေကြပါတယ်။ အမှန်မှာတော့ ဘုရား၊တရား၊သံဃာရတနာသုံးပါး ဟာ ဆင်းရဲပယ်ဖျောက်ချမ်းသာရောက်စေတဲ့ဝတ္ထုမှန်သုံးပါးဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ သဒ္ဓါ၊ သိမှတ်နားလည်တဲ့ပညာကိုသရဏဂုံ(သို့) ကိုးကွယ်ဆည်း ကပ်မှုလို့ ခေါ်တယ်။
မိရိုးဖလာအလွတ်ရထားလို့ဖြစ်စေ၊ ဘုန်းကြီက ချပေးလို့ဖြစ်စေ၊ဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိ စသည် ဆိုတဲ့အခါ ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရားကို အသိဉာဏ်နဲ့မယှဉ်တဲ့ဉာဏဝိပ္ပယုတ် သရဏဂုံလို့ ခေါ်တယ်။ ဆင်းရဲပယ်ဖျောက်၊ ချမ်းသာရောက်စေတဲ့ဝတ္ထုမှန် သုံးပါးဖြစ်ကြောင်းကို ယုံလဲယုံကြည် မယ်၊
သိရှိနားလည်မှုလဲရှိမယ်ဆိုရင် ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါ၊ သိနားလည်မှုပညာနှစ်ပါးကိုအသိဉာဏ် နဲ့ယှဉ်တဲ့ ဉာဏသမ္ပယုတ်သရဏဂုံ လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ရတနာသုံးပါးဟာ ဘေးရန်ပယ်ဖျောက် ချမ်းသာ ရောက်စေတက် တဲ့ဝတ္ထုမှန်သုံးပါးဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်သိမှတ်ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်သူ၊ယုံကြည်သိမှတ်တဲ့သဒ္ဓါ၊ပညာဦးဆောင်တဲ့စိတ်အစဉ်နဲ့ရွတ်ဆိုတဲ့လူကို(လောကီသရဏဂုံ)ဆောက်တည်တဲ့လူလို့ခေါ်ပြီး၊ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်မှရရှိတဲ့မဂ်စိတ်လေးပါးကိုရတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှစ် ယောက်ကို (လောကုတ္တရာသရဏဂုံ) တည်တဲ့လူလို့ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
စိတ်ကြည်လင်တယ်၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ လာဘ်သပ်ပကာ တိုးတယ်၊ သေတဲ့အခါမှာ အပါယ်လေးဘုံမ ရောက်ဘဲ လူစည်းစိမ်၊ နတ်စည်းစိမ်ခံစားရတယ်။ လောကုတ္တရာသရဏဂုံ ( ၄ ) ပါးကတော့ ဖိုလ်လေးပါးအကျိုးကို ခံစားရတယ်။ ဝဋ်ဒုက္ခမှကင်းပြီး နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ ကိုရရှိခံစားနိုင်ပါတယ်။
လောကုတ္တရာသရဏဂုံကတော့ တစ်ခါရပြီးရင် ဘယ်တော့မှမပျက်စီးတော့ပါဘူး၊နိဗ္ဗာန်ရတဲ့အထိ ဘဝအဆက်ဆက် တည်မြဲသွားတယ်။ တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့် မြင့်တက်ပြီးနိဗ္ဗာန်တိုင် ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ လောကီသရဏဂုံကတော့ အခြားဘာသာကိုကူးပြောင်းကိုးကွယ်တဲ့အခါ၊ ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွား ကွယ်လွန်တဲ့အခါပျက်စီးပါတယ်။အသိစိတ်မရှိတဲ့ အလောင်းကောင်ကြီးကိုလဲ သရဏဂုံတင်တဲ့ကိစ္စကလဲအသိစိတ်မရှိတဲ့ အလောင်းကောင်ကြီးကတော့ သရဏဂုံမရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေတဲ့သူဟာပြိတ္တာဖြစ်နေလို့ တရားလာနာရင်တော့ ကုသိုလ်ရပါတယ်။ သာဓုခေါ်နိုင်ပါတယ်။
သေဆုံးသွားတဲ့အခါ ခြောက်တာတို့၊ လှ့န်တာတို့၊ နှုတ်ဆက်တာတို့ဟာ ဝေမာနိကပြိတ္တာ၊တစ္ဆေ၊ သရဲ ဖြစ်လို့သာ ခြောက်လှန့်လိုရတယ်ဆိုတာ စကားချပ်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ လူ့ဘဝမှာ မကောင်းတာအကုန်လုပ်၊ အကုသိုလ်အားကြီးတဲ့သူကတော့သေတဲ့အခါ ငရဲကို တိုက်ရိုက်ရောက်သွားတဲ့ အတွက် ခြောက်လှန့်ဘို့ နှုတ်ဆက်ဖို့ နေနေသာသာ သူကိုယ်တိုင်ငရဲဘုံမှာ ဒုက္ခပေါင်းစုံ မရှုမလှ ခံစားနေ ရပါတယ်။
ရတနာသုံးပါးဟာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်စရာ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား၊ ရတနာသုံးပါး ကိုကိုးကွယ်ဆည်းကပ် လို့ ရောအကျိုးကျေးဇူးရှိပါ့မလား လို့သံသယစိတ် တွေဝင်တဲ့အခါ မှာလည်းသရဏဂုံညစ်နွမ်းပါတယ်။ဒါဟာလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ သတိထား သင့်တဲ့အချက် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းဖြူစင်လတ်ဆတ် နေအောင် ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည် ကိုးစားစိတ်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။လောကုတ္တရာ သရဏဂုံကတော့ ဘယ်အခါမှမညစ်နွမ်းပါဘူး။
တစ်ကြိမ်ဆောက်တည်ထားတဲ့ လောကီသရဏဂုံဟာ ဘာသာပြောင်းရင်၊သေရင် ပျက်စီးပါတယ်။တစ်ခါသာမက အကြိမ်ကြိမ် ဆောက်တည်နိုင်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်အကြိမ်ကြိမ် ရနေပါတယ်။(၂၄ ) ပစ္စည်းပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာအာသေဝနပစ္စည်းဆိုတာ ရှိပါ တယ်။ကုသိုလ် ကောင်းမှု ကို ထပ်ခါ၊ ထပ်ခါပြုလုပ်ခြင်း၊ တစ်ခါလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကို ထပ်ခါ ထပ်ခါပွား များနေခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ဟာအင်အားကြီးမားလာပါတယ်။ဒီလို ကုသိုလ်အင်အား ကြီးမားလာအောင်လို့သရဏဂုံကိုအထပ်ထပ် တည်ဆောက်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တဲ့သူဟာ သေရင်အပါယ်မလားဘူး၊သေရင်နတ်ပြည်တော့ အနည်းဆုံး ရောက်တယ်လို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဘုရားဟောထားပါတယ်။ နတ်သား ချင်းတူ တာတောင် လူ့ပြည်မှာသရဏဂုံတည်သူ၊ပွာများသူဟာနတ်ပြည်မှာအခြားနတ်သားတွေ ထက်အသက် ၊အရောင်အဝါ၊အခြွေအရံ၊ ချမ်းသာ၊ အစိုးရခြင်း၊ ရူပါရုံ၊ သဒ္ဓါရုံ၊ ဂန္ဓာရုံ၊ ရသာရုံ၊ဖောဋ္ဌဗ္ဗရုံ ဒီ ၁၀-ပါးတို့ဖြင့် အခြားနတ်သားများထက် လွန်ကဲတယ်လို့ တာဝတိံသာ နတ်ပြည်သို့ကြွတော်မူတဲ့ ရှင်မောဂ္ဂလန် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကသေရည်၊သေရက်နေ့စဉ် ရက်ဆက်သောက်တဲ့ သရဏဥပါသကာဆိုတာရှိခဲ့တယ်။ သူဟာသရဏဂုံ တည်တဲ့အတွက် သူ့ကိုသရဏဥပါသကာလို ခေါ်ပါတယ်။ဒီလူသေတဲ့အခါ ဘုရားရှင် ကနတ်ပြည်ကို ရောက်တယ်လို့ဟောတော်မူတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ဆွေတော်၊မျိုးတော်တွေကဘုရားရှင် ကို ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင် ကြပါတယ်။ ဘုရားရှင်စကားက ဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားပေါ့။ ဒါနဲ့မဟာနာမ် မင်းကကြားပြီးအရှင်ဘုရား..အရှင်ဘုရားရဲ့ ဆွေမျိုးတွေကအရှင်ဘုရားကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင် ကြတယ်ဘုရား။သေ အရက် ကိုနေ့ စဉ်သောက် တဲ့သူဟာ သေတော့ နတ်ပြည်ရောက်တယ် ဆိုတာအရှင်ဘုရားဟောတာကို ဘယ်သူမှမယုံကြဘူး ဘုရားလို့ လျှောက်တယ်။
ဘုရားရှင်က…."သူဟာ သေတာနဲ့ တပြိုင်နက်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်။ သေရည်၊သေရက်သောက် တဲ့ကံကသူ့ကိုမတားမြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်တုံးဆိုတော့ဘုရား၊တရား၊သံဃာဆိုတဲ့ ရတနာသုံးပါးရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော် များက အတိုင်းမသိ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ် တာကတကြောင်း၊ သူကလည်းဘဲရတနာသုံးပါးကို အသက်စွန့် ၍ယုံကြည်ခြင်းငှာ စွမ်းနိုင်တဲ့အဝေစ္စပဿဒဟုဆိုအပ်တဲ့ သဒ္ဓါတရားထားရှိတာက တကြောင်း ဒီအကြောင်းများကြောင့် သေရည်၊သေရက်သောက်တဲ့ အကုသိုလ်ကံ ဟာသူ့ကိုမတားမြစ်နိုင် ဘူး လို့မိန့်ကြား တော်မူပါတယ်။ "
သရဏဥပါသကာကိုတစ်ဖက်သားက“သရဏဥပါသကာ..သင်ဘုရားကိုဘုရားမဟုတ်ဘူး၊တရားကိုတရားမဟုတ်ဘူး၊သံဃာကိုသံဃာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရင်ပြော၊မပြောရင် သင့်ခေါင်းဖြတ်မယ်လို့”ဆိုခဲ့ရင်တောင်သရဏဥပါ သကာကသင်..ငါ့ခေါင်းကိုဖြတ်ချင်ဖြတ်ပါ။ ကျွှန်ုပ်ဘုရား ကိုဘုရား မဟုတ်ဘူး၊ တရားကိုတရားမဟုတ်ဘူး၊သံဃာကိုသံဃာ မဟုတ်ဘူးလို့မပြောဝံ့ဘူးလို့ ပြန်ပြောနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့်အင်မတန်စွန့် နိုင်ခဲတဲ့ တရားနှစ်ပါးအကြာင်းကို ဘုရားရှင်က ဤသို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်….
“ဒွေမာ ဘိက္ခဝေ အာသာ ဒုပ္ပဇဟာ၊
ကတမာ ဒွေ လာဘာသာ စ ဇီဝိတာသာ စ၊
ဣမာ ခေါ ဘိက္ခဝေ ဒွေ အာသာဒုပ္ပဇဟာ။”
အဓိပ္ပါယ်ကတော့- မိမိ၏အသက်၌ ကပ်ငြိတွယ်တာ သာယာမက်မောတက်တဲ့ အာသာကို လည်းစွန့် နိုင်ခဲတယ်။ လာတ် ၌ ကပ်ငြိတွယ်တာ သာယာမက်မောတက်တဲ့ အာသာကိုလဲစွန့် နိုင်ခဲ တယ်။ အဲဒီလို စွန့် နိုင်ခဲတဲ့ အကြောင်းတရားနှစ်ပါးတို့ တွင်တပါးပါးကိုစွန့် ပြီး ရတနာ သုံးပါး ကို ယုံကြည်ခြင်းငှာ စွမ်းနိုင်လို့ ရှိရင်တရားကိုအားမထုတ်ဘဲနဲ့မဂ်တရားဖိုလ်တရားကို ရနိုင်တယ် လို့ ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ရတနာသုံးပါးကို အထွတ်မြတ်ဆုံးဟု ယုံကြည်၍၊ သိ၍ ငါ့ရဲ့ကိုးကွယ်ရာပဲလို့ စိတ်၌ ဖြစ်ပေါ်နေသမျှထိုသူမှာ သရဏဂုံတည်နေတော့တာပါဘဲ။ ထိုစိတ်ကိုမစွန့် သမျှကာလပတ်လုံး၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်အဖြစ်ကိုစွန့် ၍ အခြားဘာသာထဲသို့ မဝင်သမျှကာလပတ်လုံး သရဏဂုံ မပျက်ဘဲ ဆက် လက် တည်နေပါတယ်။ ကာလရှည်ရှည်သရဏဂုံတည်လေ အကျိုးများ လေလေပါဘဲ။ဒါကြောင့် အကျိုးများလှတဲ့ သရဏဂုံကိုတသက်လုံးအတွက် ရည်မှန်း ဆောက် တည်ကြရန်၊ တသက်ပန် တည်ဆောက်ရန် သရဏဂုံကိုရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
“ တသက်ပန်တည်ဆောက်ရန် သရဏဂုံ ”
၁။ အဇ္ဇအာဒိံကတွာ အဟံ အတ္တာနံ ဗုဒ္ဓဿ နိယျာဒေမိ။
၂။ အဇ္ဇအာဒိံကတွာ အဟံ အတ္တာနံ ဓမ္မဿ နိယျာဒေမိ။
၃။ အဇ္ဇအာဒိံကတွာ အဟံ အတ္တာနံ သံဃဿ နိယျာဒေမိ။
၄။ ဇီဝိတ ပရိယန္တိကံ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။
၅။ ဇီဝိတ ပရိယန္တိကံ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။
၆။ ဇီဝိတ ပရိယန္တိကံ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။
( ဒုတိယမ္ပိ၊ တတိယမ္ပိ ) အထက်ပါအတိုင်း တည်ဆောက်ပါ။
၁။ အဇ္ဇအာဒိံကတွာ - ယနေ့ကိုအစပြု၍၊ အဟံအတ္တာနံ- မိမိကိုယ်ကို၊ဗုဒ္ဓဿ-မြတ်စွာဘုရား အား၊ နိယျာဒေမိ- အပ်နှင်းလှူဒါန်းပါ၏။
၂။ အဇ္ဇအာဒိံကတွာ - ယနေ့ကိုအစပြု၍၊ အဟံအတ္တာနံ- မိမိကိုယ်ကို၊ဓမ္မဿ-တရားတော်မြတ် အား၊ နိယျာဒေမိ- အပ်နှင်းလှူဒါန်းပါ၏။
၃။ အဇ္ဇအာဒိံကတွာ - ယနေ့ကိုအစပြု၍၊ အဟံအတ္တာနံ- မိမိကိုယ်ကို၊သံဃဿ-သံဃာတော် မြတ် အား၊ နိယျာဒေမိ- အပ်နှင်းလှူဒါန်းပါ၏။
၄။ဇီဝိတပရိယန္တိကံ - အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်၊ ဗုဒ္ဓံ - မြတ်စွာဘုရားကို၊သရဏံ -ကိုးကွယ်ရာ ဟူ၍၊ ဂစ္ဆာမိ - ဆည်းကပ်ပါ၏။
၅။ဇီဝိတပရိယန္တိကံ - အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်၊ ဓမ္မံ - တရားတော်မြတ်ကို၊သရဏံ - ကိုးကွယ်ရာ ဟူ၍၊ ဂစ္ဆာမိ - ဆည်းကပ်ပါ၏။
၆။ဇီဝိတပရိယန္တိကံ - အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်၊ သံဃံ -သံဃာတော်မြတ်ကို၊သရဏံ-ကိုးကွယ်ရာ ဟူ၍၊ ဂစ္ဆာမိ - ဆည်းကပ်ပါ၏။
တသက်လုံး အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်၊ သရဏဂုံ အမြဲတည်ပါပြီ။ အားကိုးရာ၊မှီခိုရာ၊ ဆောက်တည်ရာ ရပါပြီ။ မပျက်တော့ပါဘူး။
အယူတပါးများ - ယူသွားရင်၊ သရဏဂုံ ပျက်ပြီးလို့ မှတ်ကြပါ။ ။
ကျေးဇူးရှင် တောင်ပုလုဆရာတော်ဘုရားကြီး ၊ ဆရာသောင်းလွင် - ဘီအေ
Posted by KO KO at 3/20/2010 07:08:00 AM